China Stationary Hydraulic Material Handler WZD50-8C ndị na-emepụta na ndị na-ebubata ya |Bonny
1. WZD50-8C kwesịrị ekwesị maka nbudata na nbudata, ịkwanye, transshipment na nkwakọ ngwaahịa nke ahịhịa nchara, ogige wharf, ogige ụgbọ oloko, ọgwụgwọ mkpofu na ụlọ ọrụ ọkụ.
2. Motors nke WZD50-8C bụ ndị a maara nke ọma ika na China, ndị Motors nwekwara ike họrọ dị ka ndị ahịa chọrọ na mpaghara ike nkọwa.WZD50-8C nwere akụrụngwa hydraulic ama ama ama ama n'ụwa.
3. WZD50-8C nwere ọrụ nhọrọ dị iche iche, nke nwere ike gboo mkpa nke ndị ahịa n'ụzọ zuru ezu.Gụnyere: ụgbọ elu na-ebuli elu, ụgbọ ala kwụ ọtọ, usoro onyunyo vidiyo / ihe ngosi, sistemu igwe eletrọnịkị, sistemu nchọpụta radieshon, sistemu mmanu mmanu akpaka, wdg.
WZD50-8C bụ onye njikwa ihe ahaziri ike eletrik dabere na WZYD50-8C.Onye na-ahụ maka ihe BONY bụ ngwa ọrụ pụrụ iche dị elu maka nbudata na nbudata.Emebere ya nke ọma maka ọnọdụ nbudata na ibutu.Nke kachasị na-agụnye: njikarịcha nhazi nke ngwaọrụ arụ ọrụ na igwe dum, njikarịcha nke usoro hydraulic, njikarịcha pedestal na itule, wdg.
Ibu igwe t ≈35
Ogologo ọganihu (ọkọlọtọ) mm 8600
Ogologo osisi (ọkọlọtọ) mm 6800
Ogologo nkwado igwe (ọkọlọtọ) mm 1500
Oke.ijide iru mm /
Oke.njide omimi mm /
Oke.ijide elu mm /
1. Enwere ike imeziwanye ngwaahịa ahụ ma kwalite ya.Enwere ike ịgbanwe data na-enweghị ọkwa.
2. Maka onye na-ahụ maka ihe eji ede akwụkwọ, ọkọlọtọ na nhọrọ na-arụ ọrụ mgbakwunye & nkwado ígwè dị elu dị na-adabere na ọnọdụ ọrụ saịtị.
Nke gara aga: Onye na-ahụ maka ihe eji eme ihe na-anọpụ iche hydraulic WZD46-8C
Osote: Onye na-ahụ maka ihe eji eme ihe nke igwe Hydraulic BHW35-8
Onye njikwa ihe eji eme mmanụ dizel WZY42-8C
Onye njikwa ihe eji eme mmanụ dizel WZY32-8C
Onye njikwa ihe eji eme mmanụ dizel WZY52-8C
Onye njikwa ihe eji eme mmanụ dizel WZY22-8C